Mbelata na mmefu nlekọta ahụike nwere ike ịchekwa ijeri US $ 770 - Ụwa 2022
Mbelata na mmefu nlekọta ahụike nwere ike ịchekwa ijeri US $ 770
N'ihe a na-akpọ "ihe omimi akụ na ụba," mmefu nlekọta ahụike ebelatala nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga, na-eme ka ọtụtụ ndị na-eche ma usoro a ọ ga-aga n'ihu na, ọ bụrụ na ọ ga-eme, ma ọ ga-ebelata ụfọdụ nsogbu mmefu ego nke obodo ahụ ogologo oge..
Mana enwere ozi ọma: na okwu niile gbasara ịbelata mmefu gọọmentị, ndị ọrụ gọọmentị Washington nwere ike inwe obi ụtọ ịmara na mbelata ahụ nwere ike ịzọpụta ndị na-atụ ụtụ US ijeri $770 n'ime afọ 10 sochirinụ, dị ka ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba sitere na Mahadum Harvard si kwuo.
N'ime nnyocha e bipụtara taa na Health Affairs, Harvard economists David Cutler na Nikhil Sahni na-ekwu na ụbara arụmọrụ na usoro nlekọta ahụike, jikọtara ya na ihe ndị ọzọ dị ka mbelata nke mmepụta ọgwụ ọhụrụ na nkà na ụzụ ọhụrụ, emeela ka ọ kwụsịlata na mmefu ego Medicare. N'etiti 2000 na 2007, mmefu ahụike toro n'etiti 6.2 na 9.7 pasent kwa afọ. N'etiti 2009 na 2011, Otú ọ dị, mmefu ahụike toro na nanị 3.9 kwa afọ, nke kachasị nwayọọ n'ime afọ iri ise gara aga.
Ọ bụrụ na omume a na-aga n'ihu, ndị edemede nke ọmụmụ ahụ dere, US ga-echekwa ọtụtụ ihe na mmefu ahụike karịa ka e chere na mbụ.
"N'akụkọ ihe mere eme, laa azụ dị ka 1960, nlekọta ahụike abawanyela na ihe dịka otu na ọkara na pasent abụọ ngwa ngwa karịa akụ na ụba," Cutler kwuru na nkwupụta mgbasa ozi. "N'ime afọ iri gara aga, Otú ọ dị, nlekọta ahụike etobeghị n'ezie dị ka òkè nke GDP. Ọ bụrụ na ị buru amụma na-aga n'ihu, ọ na-asụgharị n'ime nnukwu ego."
N'ụzọ akụ na ụba, nke a nwere ike ịtụgharị gaa na ịrị elu ụgwọ ọnwa maka ndị ọrụ, dịka ụlọ ọrụ nwere ike mefuola ego ahụ na ụgwọ nlekọta ahụike na-enyeghachi ndị ọrụ ya kama. Usoro a nwekwara ike ịchekwa mmemme gọọmentị dị mkpa na-enweghị mkpa mbelata ma ọ bụ ụtụ isi dị elu, ndị edemede ahụ gbakwụnyere.
Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe ahụ ekwughị n'ụzọ doro anya njikọ dị n'etiti Iwu Nlekọta Affordable (ACA) na ụgwọ ọrụ nlekọta ahụike ugbu a na-ebelata, Cutler gwara Bloomberg.com, "[Mmetụta ACA] na-achịkọta uzuoku ka oge na-aga. Ọ bụghị ihe ndaba na ihe ndị a bụ ihe mgbagwoju anya. na-eme n'otu oge ahụ amụma na-amalite ịkatọ nnabata, ọrịa na ihe ndị dị otú ahụ."
Otú ọ dị, nsogbu bụ na n'ihi ọtụtụ ihe na-ekere òkè na usoro akụ na ụba, ọ na-esiri ike ịkọwa kpọmkwem ihe kpatara nkwụsịtụ nke mmefu nlekọta ahụike. Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba kwenyere na ACA enwebeghị mmetụta dị ntakịrị na nkwụsịtụ, kama na-ekwu maka mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-akwụ ụgwọ maka nlekọta ahụike n'ihi enweghị mkpuchi mkpuchi ma ọ bụ enweghị ike ị nweta mkpuchi.
Mana nyocha ọzọ sitere na Harvard lere anya nke ọma na ọrụ nke ego a na-akwụ n'akpa n'ibelata mmefu ahụike wee chọpụta na, n'agbanyeghị na ọ na-enye aka na ọnọdụ ndị a, o yikarịrị ka ọ bụghị ihe na-ekpebi ya.
Ya mere, na-enweghị ihe doro anya kpatara ya, nke a nwere ike ịpụta na nkwụsị nlekọta ahụike abụghị ihe na-agafe agafe. Ọ bụrụ na nke ahụ gosipụtara na ọ bụ eziokwu, US nwere ike ịbawanye ụgwọ ọrụ wee bido mee ihe ga-ekwe omume imechi mperi gọọmentị etiti.